installer ကို install doesnt? P3Dv3
မေးခွန်း installer ကို install doesnt? P3Dv3
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1326 by Rhodaf
ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်နှင့်ဘိုးအင်း 737-800 ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နှင့် installer ကို process ကို thru သွားလေ၏ပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာမှ "Sim ္တု / လေယာဉ်" တွင်မဆိုဘိုးအင်းပြပွဲဖွင့်ပါဘူး။ ငါကမှားဘယ်သို့ပြုသလော
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1327 by rikoooo
, Rhodaf မင်္ဂလာပါ
သငျသညျ, ငါတို့အများအပြား 737 Rikoooo မှာတည်ခင်းဧည်ရှိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုဒီ add-on မှ link ကိုပေးပါလို့မရပါ။
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1330 by Rhodaf
ငါ Jet2.com ဘိုးအင်း 737-800 Jet2.com အထုပ် .... P3D v3 နှင့်အဒ်မင်အခွင့်အရေးများနှင့်အတူ installer ကိုပြေးလေယာဉ် load သွား. ဘာမှမရှိဘူးခဲ့, ဒါကြောင့် SimObjects လေယာဉ် check လုပ်ထားနှင့်ဘာမှမရှိဘူး !!
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1331 by rikoooo
ကောင်းပြီ, ငါကို select '' သင်မခန့်မှန်း P3Dinstallation ကိုစဉ်အတွင်း Simulator ကိုအဖြစ် v3 ။
သင်ဖိုင်များကိုကော်ပီကူးဖို့ရှိရာ Auto-installer ကိုပြောပြနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင် 3D v3 ရွေးချယ်ရမည်။
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1332 by Rhodaf
သင်တို့သည်ဤမျှစကားမပြောနိုင်သောဒါစမတ် ... နှင့် Im ရှိပါတယ် !! ငါအလိုအလျှောက် setting ကိုအသုံးပြုပါကတစ်ဦးကိုဖန်ဆင်း FSX မိုက်ကရိုဆော့ဖအားကစားပြိုင်ပွဲ၌တည်၏။ ဒါနဲ့လက်စွဲကောက်ယူဤအချိန် browse သို့သွားလေ၏နှင့်ငါ့ကောက်ယူ P3Dv3 တည်နေရာနဲ့ဘင်ဂိုကစား !! သင့်ရဲ့သည်းခံခြင်းနှင့်အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 2019 အားလုံးကိုအကောင်းဆုံး!
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1342 by rikoooo
သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အလိုအလျောက် installer ကိုသင့်ရဲ့ auto-detect P3Dv3 လက်ရှိတည်နေရာ, သင်ရုံအော်တို installation ကိုရှေးခယျြနှင့် box ကိုစစ်ဆေး, ထုံးစံ installation ကို select လုပ်ပါရန်မလိုပါလာမယ့်အချိန် Prepar3D simulator ကိုစာရင်းထဲက v3 ။